Dardara Ganna 16 Waraana 20n - NuuralHudaa
Dardara Ganna 16 Waraana 20n
Last updated Feb 26, 2018 12
Gootichi Footoo irratti argitan kun Fawzii Al Juneydii jedhama. umriin isaa 16. Waraana Israa’el kan meeshaa waraanaa guutuu hidhatee isa ajjeesuuf itti dhufe dhagaan darbannaan qabame. gurbaa tokko nama 20n Qabanii ija hidhanii eega hedduu tumanii booda mana hidhaatti darban. footoon kun torban kana keeysa Miidiyaalee hawaasummaa irratti faca’ee addunyaan irraa haasawutti jirti.
Eega Doonaald Traamp magaalaan Al-Quds magaalaa guddoo Israa’eel tahuu labsee booda, hanga ammaatti falasxiinonni 16 ol waraana israa’eliin hidhamaniiru. namoonni 4 ol ajjeefamanii 700 ol ammoo miidhamanii jiru.
Rabbiin guddaan Haqa warra haqaatiif haa deebisu.